Заработок на Airdrop кампаниях | ငှက်ဖျားရောဂါ
ပို့စ်အမျိုးအစား:Заработок на Airdrop кампаниях
ဆက်ဖတ်ပါ Airdrop: GoodDollar – (60 токенов G$)
Airdrop: YFST ပရိုတိုကော (0.05 YFST တိုကင်များ - $25)
YFST ပရိုတိုကောသည်စွယ်စုံသုံးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်, အဆိုပါ Ethereum blockchain အပေါ်ဖန်တီးခဲ့တယ်, которая стремится объединить компании и…
ဆက်ဖတ်ပါ Airdrop: YFST ပရိုတိုကော (0.05 YFST တိုကင်များ - $25)
Airdrop: CryptoEnter - 242 လက္ခဏာသက်သေခြင်္သေ့ - $33
CryptoEnter သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်, ဘယ်ငွေပေးချေမှုကိုမဆိုလုပ်နိုင်တယ်, မှ…
ဆက်ဖတ်ပါ Airdrop: CryptoEnter - 242 လက္ခဏာသက်သေခြင်္သေ့ - $33
Sapphire Studios - စီမံကိန်းသည်မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုဖန်တီးသည်, GoldBar တိုကင်ဝင်ငွေနှင့်အတူ, အစစ်အမှန်ရွှေကိုချည်ထားလေ၏။…
ဆက်ဖတ်ပါ Бесплатная раздача криптовалюты: 500 токенов GoldBar – $17.50
စွန့်ကြဲသည်: Airdrop AmePay 700 AME တိုကင် - $14
AmePay - ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောငွေပေးချေမှုစနစ်. Telegram Bot သို့သွားပါ။ စတင်ခြင်းကိုနှိပ်ပါဘာသာစကားရွေးချယ်ကိုနှိပ်ပါ→ Accept…
ဆက်ဖတ်ပါ စွန့်ကြဲသည်: Airdrop AmePay 700 AME တိုကင် - $14
cryptocurrency ၏ဖြန့်ဖြူး: အချစ်ဇာတ်လမ်း (0.95 ဒင်္ဂါးပြား swc)
Sweatcoin - ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောလျှောက်လွှာ, အရာသည်သင်၏ခြေရာနှင့်ခြေရာခံ, သင်ကရ…
ဆက်ဖတ်ပါ cryptocurrency ၏ဖြန့်ဖြူး: အချစ်ဇာတ်လမ်း (0.95 ဒင်္ဂါးပြား swc)
စွန့်ကြဲသည်: Airdrop Bitbns (50 BNS တိုကင်)
Bitbns - အိန္ဒိယမှအရည်အသွေးနှင့်စိတ်ချရသော cryptocurrency လဲလှယ်ခြင်း, အနားသတ်ကုန်သွယ်မှုနှင့်လွယ်ကူသော interface ကိုအတူ။…
ဆက်ဖတ်ပါ စွန့်ကြဲသည်: Airdrop Bitbns (50 BNS တိုကင်)
Airdrop: စတိုးဆိုင် ($50 STO တိုကင်၌တည်၏)
Storeum - ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသော P2P စျေးကွက်, который позволяет любому пользователю и компаниям, покупать и продавать продукты…
ဆက်ဖတ်ပါ Airdrop: စတိုးဆိုင် ($50 STO တိုကင်၌တည်၏)
Airdrop: ရေတံခွန် (250 BTT တိုကင် - $0.05)
BoolWallet - ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောလက်ကိုင်ပိုက်ဆံအိတ်, для надёжного и безопасного хранения токенов и криптовалют. သွားပါ…
ဆက်ဖတ်ပါ Airdrop: ရေတံခွန် (250 BTT တိုကင် - $0.05)
cryptocurrency ၏ဖြန့်ဖြူး: ကျွမ်းကျင်သူများ (50 000 တိုကင်)
ကျွမ်းကျင်မှု - ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးစီမံကိန်း, အရာကနေအမျိုးမျိုးသောဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အကြံဥာဏ်ပေးထားပါတယ် 11 000+ блокчейн-экспертов по…
ဆက်ဖတ်ပါ cryptocurrency ၏ဖြန့်ဖြူး: ကျွမ်းကျင်သူများ (50 000 တိုကင်)
Airdrop: PAC Global (1000 PAC အကြွေစေ့ - $0.12)
PAC Global - ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော Digital Payment Network, которая соединяет продавцов и покупателей, а так-же различные…
ဆက်ဖတ်ပါ Airdrop: PAC Global (1000 PAC အကြွေစေ့ - $0.12)
စွန့်ကြဲသည်: Airdrop Solana (90 ဒင်္ဂါးပြားများ SOL - $20)
Solana - ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ultrafast, လုံခြုံပြီးအရွယ်မှာကွန်ယက်ကို, ယခင် Qualcomm အင်ဂျင်နီယာများကတည်ထောင်ခဲ့သည်, Intel, Dropbox и…
ဆက်ဖတ်ပါ စွန့်ကြဲသည်: Airdrop Solana (90 ဒင်္ဂါးပြားများ SOL - $20)